WARBIXIN: Maxaa ka socda Agagaarka ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland & Somaliland ee Tukaraq & Wararkii ugu dambeeyey? – Puntlandtimes
WARBIXIN: Maxaa ka socda Agagaarka ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland & Somaliland ee Tukaraq & Wararkii ugu dambeeyey?
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool ayaa sheegaya in ay wali sii kordhayso xiisadda ciidan ee mudada taagan, taas oo u dhaxeysay ciidamada maamulada Puntland & Somaliland oo isku haya gacan ku heynta gobalkaas, waxaana cabsi laga qabi karaa dagaal toos ah oo dhinacyadan dhexmara.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay heerka diyaar garowga labada dhinac ayaa gaaray meeshii ugu sareysay, waxaana la ogaaday in gaadiidka caafimaadka ee gurmadka deg deg ah ay labada kooxoodba geeyeen jiidaha ay isku horfadhiyaan.
Goobjoogayaal ka madax banaan aragtiyaha dhinacyada ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in cabsi laga qabi karro dagaal qarxa saacad kasta, maadaama ay labada ciidan is horfadhiyaan aysana jirin wax waan-waan iyo wada hadal ah oo socda, taas oo muujinaysa in xaaladdu aysan dagaal fursan doonin.
Dhaqdhaqaaqyada ciidan ayaa ah kuwa iska socda, waxaana mar kasta la maqlaa hubka ay isku ridaan kaas oo u muuqda SAHANka iyo Tijaabooyin ay dhinacyadu isku marinayaan hawada, taas oo ka dhigan dhiilo colaadeed.
Puntlandtimes.com waxay ogaatay in aan rajo weyn laga filan Karin dadaal ay wali wadaan Beesha Caalamka oo ay xooga ku saarayaan sidii labada dhinacba dagaal iyo guuldarro looga badbaadin lahaa, qolo kastana u gaari lahayd damaceeda ay rabto, iyadoo la adeegsanayo waxa loo yaqaano guul-guul (WIN TO WIN).
Lama garanayo sidda ay qoloba ku aqbasho damaca qolada kale, xili ay ku adkeysanayaan damacooda ku wajahan arrimaha hadda taagan oo ay koox kastaa u aragto fursad siyaasadeed iyo mid amni oo gaarayso hadba tii tagta yoolkeeda.
Puntland oo laga qabsaday gobalka Sool 11 sanno kahor, Tukaraqna laga qabsaday 3 bilood ka hor, ayaa ilaa hadda u muuqata mid soo afjartay diyaar garoow dagaal oo ay ku jirtay, haddana ay xooga saarayso sidii ay dib gacanteeda ugu soo celin lahayd magaalada Laascaanood.